How to analyze the performance of web page
အရင်ရက်တွေက အင်တာနက်ထဲ စာလိုက်ဖတ်ရင်း Google Labs ရဲ့ Page Speed Online ဆိုတဲ့ Web-based Tool တစ်ခုအကြောင်း ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ အင်တာနက်နဲ့ အဆက်ပြတ်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း စာလည်းမရေးဖြစ်သလို တော်တော်များများကိုလည်း လိုက်မဖတ်နိုင်တော့ဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ အချိန်ရလို့ ဖတ်ဖြစ်ရင်တောင် LifeHacker နဲ့ HowToGeek လောက်ပဲ ရောက်ဖြစ်တော့တယ်။
အရင်ကဖြစ်ချင်သလိုဖြစ် ပစ်ထားတဲ့ ဘလော့မှာ ခုနောက်ပိုင်း စာပြန်ရေးဖြစ်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ပြင်ဖို့ကြိုးစားမိတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ Web pages တွေရဲ့ Performance တွေ တက်လာအောင်ရယ်၊ Devices မျိုးစုံကနေ ကြည့်လို့ အဆင်ပြေဖို့ရယ် အဲ့ဒီ နှစ်ချက်ကို အဓိက အသားပေးပြီး ပြင်ဖြစ်တယ်။ အဲ့လိုပြင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့် ဘလော့ရဲ့ Performance ကို စစ်ဖို့ Page Speed Online က ကူညီပေးနိုင်တာ တွေ့ရတယ်။ သူက ကိုယ့်ဘလော့ရဲ့ Page Speed ကို စစ်ပေးယုံတင်မက ပိုမြန်လာအောင် ပြင်ဖို့လိုတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း Suggestions ပေးသေးတယ်။
Page Speed Online ကို အချိန်မရွေး ကြိုက်တဲ့ Browser နဲ့ ဖွင့်ပြီး သုံးနိုင်တယ်။ သူ့ကိုဖန်တီးရခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က Website owners တွေအတွက် ကိုယ့် Website ရဲ့ Page Speed Performance ကိုသိနိုင်ဖို့နဲ့ အကယ်၍ Speed Performance နည်းနေတယ်ဆိုရင် ပိုမြန်လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို Suggestions ပေးနိုင်ဖို့ ဖန်တီးထားတာပါ။ နောက်ပြီး Page Speed Online နဲ့ Websites တွေရဲ့ Page Speed ကိုစစ်မယ်ဆိုရင် Desktop ကကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ရနိုင်မယ့် Page Speed နဲ့ Smartphones ကနေကြည့်ရင်ရမယ့် Page Speed ကိုပါခွဲခြားဖော်ပြပေးပါတယ်။
ဒီဘက်ခေတ်မှာ အရင်လို Desktop, Laptop ဆိုတာထက် တန်ဖိုးအားဖြင့် သက်သာပြီး သယ်ရသုံးရ လွယ်တဲ့ Mobile Devices တွေက ပိုပြီးတွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးလာကြတာမို့လို့ ဘလော့ရေးသူတွေ အနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ဘလော့ကို ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ Mobile Performance ကောင်းနိုင်အောင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားဖို့ လိုပါတယ်။
ကိုယ့်ဘလော့ရဲ့ Speed တက်လာနိုင်ဖို့ Page Speed Online ကနေပေးတဲ့ အကြံပြုချက်တွေထဲက Should Fix: ခေါင်းစဉ်ခွဲအောက်မှာ ပါဝင်တဲ့ အချက်တွေကို အဓိကထား ပြင်ပေးဖို့လိုသလို ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တွေ သီးသန့်ဖော်ပြထားတဲ့ Consider Fixing: အောက်က အချက်တွေကိုလည်း အရေးပေး စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍များ စာဖတ်သူဟာ ဘလော့ရေးသူတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် Webmaster တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Page Speed Online ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကိုယ့်ဘလော့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အခုပဲ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ အင်တာနက်သုံးသူတွေအတွက်တော့ Proxy သုံးဖို့ လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။
သုံးရလွယ်ပြီး Portable ဖြစ်တဲ့ UltraSurf သုံးနိုင်ပါတယ်။
6:57 AM LeaveaComment Read More
Test Your Blog from Various Conditions
Blogger.com ကို စပြီး အခြေချမိတာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်က ဖြစ်လိမ့်မယ်။ Blogging Platform အမျိုးမျိုး မြည်းစမ်းခဲ့ဖူးပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ ဒီ Blogger ကို ပြန်ရောက်ခဲ့တာပဲ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ အရှိအတိုင်း ပြောရရင် Google ကပေးတဲ့ Blogger Service က ရိုးသားတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ဒီစိတ်ကလည်း Blogger ရေးတဲ့သက်တမ်း (၇)နှစ်ကျော်မှာ ခံစားမိတာမို့လို့ မှားနိုင်စရာမရှိဘူး။ စီးပွားရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ရေးတဲ့ ဘလော့မဟုတ်လို့ ဒီဘလော့ကနေ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာ မရခဲ့ဖူးသလို ဘလော့အပြင်အဆင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ Custom Doamin Name ဆိုတာတွေကိုလည်း စိတ်ရှိသလို မဖန်တီးနိုင်ခဲ့ဘူး။ Hosting ဝယ်ရေးဖို့ဆိုတာကတော့ အဝေးကြီးပါ။
ဒါပေမယ့် ကွန်ပြူတာနည်းပညာကို ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစွာနဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာလိုသူတွေအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ တတ်စွမ်းသရွေ့ အထောက်အကူပြုနိုင်အောင် ကျွန်တော့်ဘလော့ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
Zawgyi နဲ့ ရေးတဲ့ ဘလော့အဆင့်ကနေ Unicode အဆင့်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးတယ်။
ယူနီကုတ်ဘလော့ ဖြစ်သွားတော့ Browsers တိုင်းကနေ စာဖတ်သူရဲ့ စက်ထဲမှာ Unicode မရှိရင်တောင် ဘလော့ကို ဖတ်ဖို့အဆင်ပြေနိုင်အောင် Font Embed လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။
Templates မျိုးစုံပြောင်းပြီး Screen sizes အမျိုးမျိုး၊ Resolutions အမျိုးမျိုး၊ Desktops, Tablets နဲ့ Mobile screens အမျိုးမျိုးက ကြည့်ဖို့ အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။
ပညာရှင်တစ်ယောက် မဟုတ်တဲ့အပြင်၊ ငွေကုန်ကြေးကျမခံနိုင်တဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီအခက်အခဲတွေ အားလုံးနီးပါး ပြေလည်အောင် နာရီပေါင်းများစွာ ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ဇနီးကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး။ တကယ်လို့ စာဖတ်သူဟာ Webmaster တစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် Blog/Website တစ်ခုကို ဖန်တီးရေးသားနေတဲ့ စာရေးသူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကြားထဲက တတိယမြောက်အခက်အခဲကိုလည်း မလွဲမသွေ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြဖူးမှာပါ။
ကိုယ့်မှာဘလော့တစ်ခုလည်း ရှိနေပြီ ပင်တိုင်စာဖတ်ပရိတ်သတ်လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ရလာပြီဆိုရင် စာရေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်သုံးထားတဲ့ Theme/Template က Screen sizes အမျိုးမျိုး၊ Resolutions အမျိုးမျိုး၊ Desktops, Tablets နဲ့ Mobile screens အမျိုးမျိုးနဲ့ ကြည့်ဖို့အဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတာ မဖြစ်မနေ စမ်းသပ်ကြည့်ထားသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Templates ကို Responsive web design သုံးထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ဘလော့က Resolutions မျိုးစုံမှာ မြင်ရမယ့်အနေအထား အဆင်ပြေမှုရှိ/မရှိ သိထားဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
ဒီဘက်ခေတ်မှာ လူဖတ်များ လူဝင်များတဲ့ ထိပ်တန်း websites တော်တော်များများ Responsive web design ကိုသုံးလာကြတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Responsive web design က ကိုယ့်ဘလော့/ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဘယ်လို Devices မျိုးနဲ့ပဲကြည့်ကြည့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်။ အားလုံးသိထားပြီးတဲ့အတိုင်း Screen resolution ဆိုတာ ပုံနဲ့စာတွေကို ဘယ်လောက်ထိ ကြည်ကြည်လင်လင် ပြတ်ပြတ်သားသား ဖော်ပြနိုင်လဲဆိုတာ ရည်ညွှန်းတာမို့လို့ ကိုယ့်စက်ရဲ့ Resolution က 1600 x 1200 pixels ထက်များတယ်ဆိုရင် Screen မှာပေါ်မယ့် စာနဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရမယ်။ တကယ်လို့ Screen resolution က 800 x 600 pixels ထပ်နည်းမယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်သုံးထားတဲ့ Theme/Template က လိုက်လျောညီထွေ ဖန်တီးမပေးနိုင်ရင် Screen ပေါ်မှာ ဘာစာလုံးကိုမှ ပြတ်ပြတ်ထင်ထင် မမြင်ရတော့ဘူး။ ကိုယ်ဖတ်ချင်တာ မြင်ရဖို့ အချိန်တိုင်း Zoom ဆွဲပြီး ဖတ်ရလိမ့်မယ်။ Responsive web design က ဒီအခက်အခဲကို ပြေလည်အောင် ကူညီပေးနိုင်တယ်။ Screen sizes အမျိုးမျိုး၊ Resolutions အမျိုးမျိုး နဲ့ Devices အမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီး Screen နဲ့ Fit ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် Articles တွေကိုလည်း စာဖတ်သူ ထင်ထင်ရှားရှား ကြည့်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးနိုင်တယ်။
တကယ်တမ်းတော့ ကိုယ့်ဘလော့က Devices အမျိုးမျိုး အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ ဘယ်လိုပုံပေါက်နေမယ်ဆိုတာ သိနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ တော်ယုံလူတစ်ယောက် အများဆုံး ဆောင်ထားနိုင်ရင် ဖုန်းတစ်လုံး၊ Laptop တစ်လုံးနဲ့ Tablet တစ်လုံးပေါ့။ အဲ့ဒီ့ သုံးမျိုးလောက်နဲ့ ဘလော့တစ်ခုရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍန်ကို အတည်ပြုဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲ့လိုအခက်အခဲ ဖြစ်လာရင် ကျွန်တော်တို့ ဘလော့တွေကို Screen sizes အမျိုးမျိုးနဲ့ Resolutions အမျိုးမျိုး မှာ ဘယ်လိုအနေအထား ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်တဲ့ Online Testers တွေကို အားကိုးကြည့်ပါ။ စိတ်ကျေနပ်လောက်စရာ အဖြေ တစ်ခု ရလာပါလိမ့်မယ်။
သူကတော့ လူသုံးအများဆုံး Online resolution testers တွေထဲက တစ်ခုပါ။ Screenfly က Resolutions အမျိုးမျိုး ကို Support ပေးတဲ့အပြင် TV, Tablets, Mobile Phones, Notebooks နဲ့ Desktops အမျိုးမျိုးနဲ့လည်း ကိုယ့်ဘလော့ရဲ့ အနေအထားကို ကြည့်ရှုခွင့်ပေးပါတယ်။ အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ ရှိနေနိုင်မယ့် TechSectors ရဲ့ သွင်ပြင်ပုံပန်းသဏ္ဍန်ကို ဒီနေရာကနေ လေ့လာကြည့်ပါ။
Screenfly နဲ့ ဘလော့တစ်ခုကို စမ်းသပ်ကြည့်ချင်မယ်ဆိုရင် URL ကို Copy ကူး - သူပေးထားတဲ့ နေရာမှာ ထည့်ပြီး စမ်းယုံပါပဲ။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း Devices အမျိုးမျိုးနဲ့ ပြောင်းလဲကြည့်ရှုခွင့် ရပါလိမ့်မယ်။
TestSize ကတော့ ဘလော့တွေကို Resolutions အမျိုးမျိုးနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ သမားရိုးကျ Web app တစ်ခုပါပဲ။ သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် Resolutions ကို Manually ချိန်ညှိပြီး ကြည့်နိုင်သလို Screen size အနေအထား အတိုးအလျော့လုပ်ပြီးလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Screen-Resolution ကလည်း ဘလော့တွေကို Resolutions အမျိုးမျိုးနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ Tool တစ်ခုပါ။ တစ်ခြား Testing Tools တွေနဲ့ မတူတာက သူ့မှာ Screen-Resolution ကို ချိန်ညှိနိုင်တဲ့ Resolution options တွေကို အောက်ဘက်မှာ ထင်သာမြင်သာ ဖော်ပြပေးထားတယ်။ Screen-Resolution က Internet Explorer တွဲသုံးမှ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ခြား Browsers တွေ ဥပမာ- Chrome, Firefox တို့နဲ့ တွဲသုံးရင် Pop up Windows နဲ့ တက်လာပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကို စမ်းသုံးကြည့်မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး Screen-Resolution ကို Internet Explorer နဲ့ ဖွင့်ပြီး ကိုယ်စမ်းချင်တဲ့ ဘလော့ကို URL နေရာမှာထည့်စမ်းနိုင်ပါတယ်။
စာရေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ဘလော့မှာလေ့လာနေတဲ့ စာဖတ်သူတွေ အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့ မသွားအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ အဓိကအရေးကြီးတာမို့လို့ စာဖတ်သူဟာ စာရေးသူတစ်ယောက် ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Online Testers တွေနဲ့ စမ်းသပ်ပြီး ဘလော့ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် တည်ဆောက်သွားကြဖို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
5:31 AM LeaveaComment Read More
ဟုတ်တယ် ကျွန်တော် မမှားဘူး - ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ Blogger မှာ နေခဲ့တာ အချိန်တန်တော့ မျှော်လင့်ထားတာတွေ Google က ဖန်တီးပေးလာတယ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် မယုံနိုင်ဘူး - ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ကာလတစ်လျှောက် Blogger ကြောင့် တစ်ခါမှ စိတ်မညစ်ခဲ့ရဘူး - Hosting ပြဿနာ ဆိုတာလည်း မရှိဘူး - Site down တယ် ဆိုတာလည်း ရှိကောင်းတော့ ရှိလိမ့်မယ် - ဒါပေမယ့် တစ်ခါမှ မကြုံခဲ့ဖူးဘူး - အလကား ပေးထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလို့ မထင်ရလောက်အောင် Users တွေကို ဂရုစိုက်တယ် - ဒါ့ကြောင့် Blogger မှာ စာရေးရတာ ပျော်တယ် -
ဒီနေ့ Blogger သမားတွေအတွက် Dynamic templates အသစ် ငါးခုမိတ်ဆက်တယ် - တစ်ခြား Blog အမျိုးအစားတွေထက် Photo blog တွေ အတွက်ပိုကောင်းသွားတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်မိတယ် - Web နည်းပညာပိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ AJAX, HTML5, CSS3 အားလုံးရဲ့ နောက်ဆုံး နည်းပညာတွေ သုံးပြီး တည်ဆောက်ထားတယ်လို့ သိရတယ် -
ဘယ်လိုတွေ ပြောင်းလဲသွားမယ် ဆိုတာတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Links တွေကိုသာ နှိပ်ပြီး သွားကြည့်ပါ -
မြင်တွေရမယ့် ပုံစံ အကြမ်းဖျဉ်းက အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းပါ - Blogger ကနေ တဆင့် Picasa မှာ တင်ပြီး သုံးထားသမျှ ကိုယ့် ဘလော့က ဓာတ်ပုံတွေကို Views အမျိုးမျိုးနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း Blog ရေးတယ် ဆိုရင် ကိုယ်ရေးတဲ့ ဘလော့ရဲ့ URL နောက်မှာ “/view” ကို ထပ်ပေါင်းထည့်ပြီး ဒီ Views ငါးမျိုးနဲ့ ဘယ်လို ပေါ်မယ်ဆိုတာ စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ် - ဥပမာ ပြောရရင် - http://mlovesm.blogspot.com/view ဆိုတာမျိုးပေါ့ - ဒီ Views တွေနဲ့ Public ပေးထားတဲ့ Blogger အားလုံး ကြည့်လို့ ရပါပြီ - ကန့်သတ်ချက် တစ်ခု ရှိတာက Public ပေးထားပေမယ့် ဒီ Dynamic Views သုံးပြီး ကိုယ့် ဘလော့ကို ကြည့်လို့ မရရင် feeds တွေကို fully enabled မပေးထားရသေးလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် - Blogger ထဲကို ဝင်ပြီး Settings | Site feed tab မှာ Full ပေးပါ - Setting | Formatting tab မှာလည်း Enable Dynamic Views ကို Yes ပေးထားဖို့ လိုပါတယ် -
Youtube ကြည့်လို့ ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအောက်က ဗွီဒီယိုလေး ကြည့်ကြည်ပါ - အပြင်အဆင်လေးတွေ ပိုနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
1:28 AM LeaveaComment Read More
11Dreams with Simplex Enews Template
Template သဘောမကျလို့ ဆိုပြီး ပြင်နေတာ ၁ ပတ်လောက်ကြာသွားတယ် - အရင် Template ကို သဘောမကျလို့တော့ မဟုတ်ဘူး - အရင် Template က Simplexdesign ကနေ ယူပြီးသုံးထားတာ - ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံမျိုး အဲ့ဒီ Template မှာတော်တော်များများ ပါလို့ အရင်ကဆို Template တစ်ခုကို ၁ ပတ် တစ်ခါလောက် ပြောင်းနေရာကနေ ခု အဲ့ဒီ့ Template လေးနဲ့ တော်တော်ကြာခဲ့တယ် - ဒါပေမယ့် ဒီ လဆန်းပိုင်းက SIMPLEX ENEWS TEMPLATE ကိုပဲ Simplexdesign မှာ Version အသစ်ထပ် ထုတ်တယ် - အရင်ကနဲ့ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား အမြင်ပြောင်းသွားတာမျိုး မရှိပေမယ့် ဒီ Features အသစ်လေးတွေ ပါလာတော့ လူကမျက်စိကျမိပြန်ရော -
- Disqus comment systemt ,a recent comment tab from Disqus
- A page for embeded forum ( sidebar is hidden when you enter this page )
- Reduce loading time
- Number of post in each category is different .
အထူးသဖြင့်တော့ Reduce loading time ကို သဘောကျတာ - အရင်က Blog က တော်တော်ကြီးကို နှေးနေတယ် - ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Connection က ဒီလောက် အဆိုးကြီး မဟုတ်တာတောင် ဒီလောက် လေးနေရင် မြန်မာနိုင်ငံက စာလာဖတ်တတ်တဲ့သူတွေ ဘယ်လိုများ သုံးနေရမလဲ ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းတာနဲ့ ပြောင်းပေးချင်နေတာ - ဒါပေမယ့် Template တစ်ခု ပြောင်းရတာ အရမ်းကို အလုပ်ရှုပ်တယ် - Features များလေး ခေါင်းရှုပ်လေပဲ - နောက်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ထပ်ပေါင်းထည့်ချင် ပြင်ချင်တာတွေကလည်း ရှိနေတော့ ပြောင်းချင်တာပဲရှိတယ် လူကလည်း မအားတာနဲ့ စိတ်ထဲတွေ့တဲ့2Column Template လေးတစ်ခု အရင်ကောက်တင်ထားလိုက်ပြီး မနေ့ညကမှ အသစ်ထွက်တဲ့ နောက် SIMPLEX ENEWS TEMPLATE အသစ်ကို ပြောင်းတင်ဖြစ်တယ် - တင်တင်ခြင်း Errors တွေ အရမ်းတက်နေလို့ စာဖတ်သူတွေ စိတ်ရှုပ်မှာ စိုးတာနဲ့ အသိမပေးပဲ ခဏ ပိတ်ထား လိုက်ရတယ် - အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ် - ဒီကြားထဲ Disqus comment system ထည့်လိုက်တာမှာ အရင် ( ၄ ) နှစ်နီးပါး ရေးခဲ့တုန်းက မှတ်မှတ်ရရ ရခဲ့တဲ့ Comments လေး ( ၆ ) ခုမှာ ( ၄ ) ခု ပျက်သွားတယ် - Comments ပေးခဲ့တဲ့သူတွေ ဒီကနေပဲ တောင်းပန်ပါရစေ - ကောင်းစေချင်လို့ လုပ်ပေမယ့် မထင်မှတ် ထားတာလေး ပါသွားတော့ စိတ်ထဲ မကောင်းဘူး -
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရင်ကထက် loading time သိသိသာသာလေး လျော့သွားတာရော - တစ်ခြား ထပ်ပေါင်း ဖြည့်ချင်တာလေး ဖြည့်လိုက်ရတာရော - ဖတ်သူနည်းပေမယ့် ဖတ်ရတဲ့သူ စိတ်ချမ်းသာအောင် တတ်နိုင်သလောက်လေး ပြင်ပေးလိုက်ရလို့ စိတ်တော့ ချမ်းသာပါတယ် - အားလုံး စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ -
3:48 AM 1 comment Read More
ကျွန်တော် wordpress နဲ့ဘလော့ထားတာလေးကို Hosting တင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ညီအကိုမောင်နှမများ ကူညီပေးကြပါဦးနော်... -လတ်တလောအသုံးပြုဖို ့ရနိုင်ပြီးတော့ Disk space များများလေး ရရင်လိုချင်ပါတရ်ခင်ဗျာ... တွေ ့သမျှဆိုက်တွေကလဲ အဆင်မပြေလို ့ပါ.... ကူညီပေးကြပါဦး.... ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတရ်....
Wordpress blog တွေကို self-hosted လုပ်ဖို့ အတွက် Free ရတဲ့ web hosting services တွေဆိုတာ တော်တော်လေး ရှာရ လက်ပေါက်ကပ်ပါတယ်။ အရင် သူများတကာ ညွှန်ထားတာတွေ လိုက်လုပ်ကြည့်တာ စစချင်းတော့ ကောင်းပေမယ့် နောက်ပိုင်းကျတော့ ပြဿနာက အနဲနဲ့ အများ ရှိလာတာ ချည်းပါပဲ - ဒါက ညွှန်ပြတဲ့သူ အပြစ် မဟုတ်ပါဘူး - Free ရတဲ့ web hosting services ဆိုတာ သူတို့လည်း ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ အမြည်းချကျွေးတဲ့ သဘောမျိုးပါ - ကိုယ်က အမြည်းချည်း ထိုင်စား နေရင်တော့ ကန်လွှတ်မယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပါပဲ -
ဒါပေမယ့် ကို openeyes အနေနဲ့ Free ရတဲ့ web hosting services ကို စိတ်မကုန်သေးဘူး ဆိုရင်တော့ သုံးဖို့ အဆင်ပြေလောက်မယ့် web hosting services တစ်ချို့နဲ့ ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လတ်တလောမှာ အဲ့ဒီ့တွေမှာပဲ Wordpress blog တွေ လုပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Blog သာ ရှိတာပါဗျာ - စမ်းတဲ့ သဘောလောက် လျှောက်လုပ်တာပါ - ဟုတ်တိ ပတ်တိ ရေးတာမျိုး မရှိတော့ ဘယ်လောက်ထိ ကောင်းတယ် ဘာတယ် ဆိုတာတော့ တပ်အပ်ကြီး ပြောမပြနိုင်ပါဘူး - free ရတဲ့ web hosting services တွေကို search engines တွေကလည်း ရှာဖြွေကည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုopeneyes လည်း သိတဲ့ အတိုင်း အဲလိုရှာလိုက်ရင် တွေ့တာတွေတော်တော်များများက အသုံးမဝင်တာတွေ တော်တော်များများပါတယ်။
အဲ့ကြောင့်မို့ ကျွန်တော် ခုဖော်ပြပေးသွားမယ့် web hosting services တွေဟာ ကျွန်တော် စမ်းသုံးခဲ့ဖူးသမျှ ထဲက သုံးရလည်း လွယ်ပြီး Free လည်း ရတဲ့ web hosting services တွေကို လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာပါ။ စမ်းသုံးကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေတယ် ဆိုရင် တစ်ခြား ကိုopeneyes လို အသုံးလိုနေတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း ဝေမျှ ပေးလိုက်ပါ။
အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ free ရတဲ့ web hosting services တွေကို မစမ်းသပ်ခင်မှာ ဘယ် အချက်တွေပေါ် မူတည်ပြီး ဒီ hosting services တွေကို ကောင်းမကောင်း ဘယ်လိုသုံးသပ်တယ် ဆိုတာလေး အရင် ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့က free လိုချင်တာ ဆိုတော့ အရမ်းကြီး တောင်းဆိုလို့လည်း မရဘူးပေါ့လေ - သူပေးထားတာတွေထဲကမှ hosting services တွေကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု နိှုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တာနဲ့ ဘယ်ကောင်က အကိုက်ညီဆုံး ဖြစ်မလဲ ဆုံးဖြတ်ရမယ့် သဘောမျိုးပေါ့ - တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကြိုက်ချင်း မတူညီကြလို့ ကျွန်တော် သဘောကျတာတွေကို တစ်ခြား သူတွေ သဘောကျချင်မှ ကျပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဘာကြောင့် သူတို့ကို ရွေးချယ်တယ် ဆိုတာ အကျဉ်းဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
ပထမဆုံး အနေနဲ့ web hosting services ဆိုတာမျိုးက အသုံးပြုဖို့ လွယ်ကူရပါမယ်။ Service တွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ပေးတာချင်း မတူတတ်ပေမယ့် ပုံမှန်အားဖြင့် web hosting services တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့ မဖြစ်မနေ ပါမပါ ကြည့်ရမှာက -
* Installer script လို့ ခေါ်တဲ့ Wordpress သမားတွေ အတွက် automatic installation ( နောက် တစ်ခြား server-side applications တွေ )
* နောက် web management အတွက် အသုံးပြုရ လွယ်ကူစေမယ့် control panel ပါဝင်မှု
* MySQL နဲ့ PHP latest version ဒါမှမဟုတ် ( အနည်းဆုံးတော့ သိပ် Old မဖြစ်တဲ့ဟာ )
* Files တွေကို upload နဲ့ delete လုပ်ဖို့ FTP access ရမရ
* ကိုယ့်ရဲ့ own domain သုံးလို့ ရမရ ( ဒါမှ ကျွန်တော်တို့ CO.CC တို့ တစ်ခြား Personal Domain တွေ အသုံးချနိုင်ပါမယ်။ )
နောက်တစ်ချက် ကြည့်ရမှာက Free ပေးတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ များသောအားဖြင့်တော့ သူတို့က Free - Free လို့သာ ပြောတာ တကယ်တော့ အမှန်တကယ် Free မဟုတ်တာ များပါတယ်။ Services တစ်ချို့က free hosting လို့ အမည်ခံပြီး ကြော်ငြာတွေ ထည့်တယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ free hosting လို့ အမည်ခံပြီး တကယ်တမ်း သွားလုပ်တော့ activation မပေးဘူး - တစ်ချို့ကျတော့ free hosting လို့ အမည်ခံပြီး သူ့ဆီက Services မရသေးခင် တစ်ခြား ဖိုရမ် တစ်ခုခုမှာ ပို့စ် အရေအတွက် ဘယ်လောက် အနည်းဆုံး တင်ပြီးသား ဖြစ်ရမယ် ဆိုတာမျိုးတွေကလည်း လာပါသေးတယ်။ ဒါတွေက ကိုယ်တွေ့ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ခု ကျွန်တော် တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်မယ့် free hosting တွေကို ညွှန်ပေးကြည့်ပါမယ်။
တတ်နိုင်သလောက် features အများဆုံး - disk space ပမာဏ အများဆုံး - monthly data transfer ( bandwidth ) အများဆုံး နဲ့ customer service နဲ့ technical support ရနိုင်မယ့် Hosting မျိုးကို အဓိက ထားရွေးပြီး ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ တစ်ခုခု အဆင်မပြေတာ ရှိခဲ့ရင် Free ဆိုတာကိုတော့ မမေ့ပါနဲ့ - Free ဖြစ်တဲ့ အတွက် အနည်းနဲ့ အများတော့ စိတ်ကသိကအောက် ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ကြိုက်ရာ ကိုသာ ကိုယ့်ဘာသာ နိှုင်းယှဉ်ဆုံးဖြတ်ပြီး သုံးစွဲကြည့်ပါ။
*5GB disk space per account with unlimited account per users
* 50 GB of monthly data transfer
* 5.5 GB disk space
* 200 GB of monthly data transfer
*4GB of monthly data transfer
*6GB of monthly data transfer
* 15 GB of monthly data transfer
* 100 GB of monthly data transfer
ကျွန်တော် ခု ဖော်ပြခဲ့သလောက်ဆို ကို openeyes ရဲ့ (Wordpress) blog အတွက် အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့တာတွေထက် ကောင်းမယ့် တစ်ခြား Free Hosting တွေလည်း ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်ဦးမယ်။ သိတဲ့ သူများလည်း ဝိုင်းဝန်းဝေမျှ ပေးကြပါဦး။ အဆင်ပြေပါစေ ကိုopeneyes -
6:03 AM LeaveaComment Read More
Originally Posted by နိုင်လင်းစိုး
အဆင်ပြေရင် ကူညီပါဦးဗျာ..ကျနော် ဘလော့ကနေ XML ဖိုင်ကိုဒေါင်းပြီးတော့ WP အသစ်မှာဘယ်လိုသွင်းရမလဲ မသိလို့ပါ.
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုနိုင်လင်းစိုးရေ -
Blog Service တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုသို့ Post တွေ Comment တွေ ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ Converter တစ်ခုကို Google Code ကနေ ဖန်တီးပေးထားတာ ကြာပါပြီ။ သူ့ကို Google Blog Converters လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူ့ကို အသုံးပြုပြီး Blogger က ပို့စ်တွေကို WordPress ထဲ အချိန်ကုန်ခံစရာ မလိုပဲ - သက်သက်သာသာနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းယူလို့ ရပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုးပဲ အရင်က ရွှေ့ပြောင်းဖို့ အခက်အခဲတွေ မနည်းမနော ရှိနေတဲ့ WordPress, LiveJournal, Movable Type တွေက ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ပို့စ်တွေ ကောမန့်တွေကိုလည်း Blogger ထဲကို ပြောင်းတင်လို့ ရနေပါပြီ။ ဒီ့ထက်တိကျတဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို Google Code မှာ ဖတ်ရှုကြည့်ပြီး လက်တွေ့ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်မယ် ဆိုရင်တော့ Blogger ကနေ Wordpress ပြောင်းဖို့ အတွက်ဆို - Blogger2Wordpress နဲ့ Wordpress ကနေ Blogger ပြန်ပြောင်းမယ် ဆိုရင် WordPress2Blogger တို့မှာ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ပုံ လုပ်ဆောင်နည်းကို အကြမ်းဖျဉ်းပြောရရင်တော့ Blogger ကနေ Wordpress ကို ပြောင်းတဲ့ နေရာမှာ Posts တွေ Comments တွေကို Blogger ကနေ Export လုပ်ထားတဲ့ XML နဲ့ တိုက်ရိုက် Wordpress ထဲ သွားထည့်လို့ မရပါဘူး - Blogger ကနေ ကျလာတဲ့ XML ကို Wordpress ထဲ ထည့်ဖို့ အတွက် သူ့ကို Wordpress XML အဖြစ် Blogger2Wordpress မှာ Browse ကနေ တစ်ဆင့် Convert လုပ်ယူရပါမယ်။
Convert လုပ်ပြီးသွားရင် သူက ခုလိုမေးပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ့ XML ကို Desktop ပေါ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် သိမ်းထားလိုက်ပါ။
နောက် အဲ့ဒီ့ရလာတဲ့ Wordpress XML ကိုမှ Wordpress ထဲကို ဝင်ပြီး Import လုပ်ပါ။ ကိုနိုင်လင်းစိုးလိုချင်တဲ့ Blogger က posts တွေ comments တွေအားလုံး Wordpress မှာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခြား မေးစရာလေးတွေ အတွက် ကျွန်တော့် MF mail ကို add ထားလို့ ရပါတယ်။
Feel free to contact me - levendreams@myanmarfamily.org
11:21 AM LeaveaComment Read More
3 Buzz tips
User တွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို လိုက်ပြီး ဖန်တီး ပြင်ဆင်မှုတွေ အဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ Google Buzz က အခုဆိုရင် နောက်ထပ် features အသစ် ( ၃ ) ခုကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အဲတာတွေက အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါ။ -
( ၁ ) မိမိစိတ်ဝင်စားသော အကြောင်းအရာ ( Posts ) များအား မိမိ၏ Mail box အတွင်းလို့ ပို့ဆောင်ခြင်း။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို Buzz ထဲမှာတွေ့ရှိပြီး သဘောကျလို့ နောင်တစ်ချိန်မှာလည်း အလွယ်တကူ ပြန်လည် ဖတ်ရှုရလွယ်ကူအောင် ကိုယ့် Mail inbox ထဲကို Buzz ကနေ တစ်ဆင့် ပို့ထားချင်တာမျိုး ရှိပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သဘောကျတဲ့ Posts တွေကနေပြီး ပြောင်းလဲမှုတွေ သိရှိရနိုင်ဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ Posts တွေမှာ Comments တွေပေးပြီး ကိုယ့် Mail box ထဲကို Posts နဲက ပတ်သတ်တဲ့ Updates တွေ ပုံမှန်ဝင်လာပြီး သတိပေးနေအောင် လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ ဒီ Posts နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည် ဖြစ်စေ ၊ မဆွေးနွေးခ့ဲသည် ဖြစ်စေ ကိုယ့် Mail box ထဲကို ရောက်လာအောင် လုပ်ဆောင်လို့ ရပါပြီ။ ဒါကို လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် Post ရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့် မှာ ရှိတဲ့ down-arrow ကနေပြီး "Deliver to my Inbox" ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
( ၂ ) Comments များအား ဖြုတ်ထားခြင်း။
တကယ်လို့ ကိုယ်စတင် ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ တစ်ခြား သူတစ်ယောက်ရဲ့ Comments တွေကို လက်မခံချင်ဘူးဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါလို လုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင် မြင်ရမယ့် ပုံစံကတော့ ခုလို ဖြစ်ပါတယ်။
( ၃ ) Google Buzz သို့ Share ပေးလိုက်သော Posts အသီးသီးမှ ထို Posts အတွက် သက်ဆိုင်ရာ မူရင်း Sites များ၏ Links များအား ပူးတွဲမှတ်သားပေးထားခြင်း။
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဟာ Posts တစ်ခုခုကို သဘောကျလို့ Google Buzz ရှိရာဆီ အဲ့ဒီ Post ရဲ့ Link ကို Share ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ Buzz ကနေပြီး သက်ဆိုင်ရာ မူရင်း Posts တည်ရှိရာ Site ရဲ့ တည်နေရာကို ခုလို ပူးတွဲ မှတ်ရလွယ်အောင် ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2:27 AM LeaveaComment Read More
Google Apps Setup for your Website
Google က ပေးထားတဲ့ Google Apps ဆိုတာ Google ရဲ့ products တြွေဖစ်တဲ့ mail, docs, calender .. စတာတွေကို အသုံးပြုသူတွေအတွက် အဲ့ဒီ့ အသုံးပြု user တွေမှာသာ ကိုယ်ပိုင် domain name ကိုယ်စီ ရှိကြမယ် ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ domain name နဲ့ အတူတွဲပြီး Google ရဲ့ products ကို အသုံးချနိုင်အောင် အလကားမတ်တင်းပေးထားတဲ့ service တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလကားလို့ ဆိုပေမယ့် လိုတာထက်ပိုပြီး limit များများနဲ့ သုံးချင်တာမျိုး ဆိုရင်တော့လည်း ပိုက်ပိုက်ပေးပြီး ဝယ်ရတာတွေလည်း ရှိတာပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် သက်တော့သက်သာပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ domain name ကို Google products နဲ့ တွဲပြီး အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး အနေနဲ့ Google apps မှာ Signup လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဆိုကြပါစို့ အဲလို လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဘာဖြစ်လာမှာလဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အရင်သုံးနေကျ mkfhsjas@gmail.com ဆိုတာမျိုးကနေ mkfhsjas@yourdomain.com ( yourname@ yourdomain.com ) ဆိုတာမျိုး ပြောင်းလဲပြီး Gmail ကို အသုံးချနိုင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မက ဒီ mkfhsjas@11dreams.net ဆိုတဲ့ account ကို Gtalk မှာလည်း အသုံးပြုလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်လည်း မကသေးပါဘူး နောက်ထပ် Google Docs တို့ ၊ Google calender တို့ စတာတွေမှာလည်း အသုံးချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Signing up for Google Apps Free Version
( ၁ ) ပထမဆုံး အနေနဲ့ ဖော်ပြပါ link ကို အရင်ဆုံးသွားပြီး Google Apps အတွက် Signup လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ >> http://www.google.com/a/cpanel/domain/new
( ၂ ) Signup Process လုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေကို Google Apps Dashboard ဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ကျွန်တော်တို့ Signup လုပ်လိုက်တဲ့ Domain name က ကျွန်တော်တို့ တကယ်ပိုင်ဆိုင်တာ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ အတွက် Domain Ownership ကို verify လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့် Site အတွက် Google Apps မှာ account လုပ်တုန်းက Screen shot ထားတာလေး တစ်ချို့ တင်ပြထားပါတယ်။ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Google Apps Dashboard ကိုရောက်သွားပြီ ဆိုရင် နည်းလမ်း ( ၂ ) မျိုး ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ User တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် Domain name ပိုင်ဆိုင်ပုံချင်း မတူကြလို့ အဆင်ပြေတာ တစ်ခုကိုရွေးပေးပါ။ ဘာကိုဘယ်လိုရွေးရမှာလဲ ဆိုရင်တော့ တကယ်လို့ သင်ဟာ ကိုယ့် website ကို self hosted လုပ်ထားတာမျိုး ဆိုရင် Upload an HTML file method က ပိုပြီး လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ အဲလို မဟုတ်ပဲ Blogger Custom domain ကို အသုံးပြုပြီး Domain name တစ်ခုပဲ ဝယ်ယူ ပြောင်းလဲ ထားတာမျိုး ဆိုရင်တော့ ဒုတိယနည်းဖြစ်တဲ့ Change ...... CNAME record ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
လောလောဆယ် ကျွန်တော် ဒုတိယနည်းဖြစ်တဲ့ Change ...... CNAME record ကို ရွေးချယ်သူတွေ အတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နည်းကို ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်။ ဘာကြောင့် ဒီနည်းကို ဦးတည်ချက်ထားပြီး ဆွေးနွေးရတာလဲ ဆိုရင် Blog ရေးသူ တော်တော်များများ Blogger Custom domain ကိုပဲ သုံးကြတာ များလို့ပါ။ self hosted တွေက ဈေးလည်း တော်တော်မြောက်သလို Blogger တစ်ယောက်အနေနဲ့ အသုံးပြုသူလည်း တော်တော်လေး နည်းတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲတာကြောင့်ပါ။ ဖော်ပြထားချက်အတိုင်း Change ...... CNAME record ကိုရွေးပြီး Continue ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ ခု အောက်ဖော်ပြပါပုံလို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
သူဖော်ပြထားချက် အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ Domain name ဝယ်ယူထားတဲ့ Domain hosting service ရှိရာဆီကို သွားပြီး DNS Management Page ထဲကို ဝင်ရပါလိမ့်မယ်။ Services တွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူလို့ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ ဆိုတာ တိတိကျကျကြီး ပုံသေကားချပ် ပြောပြဖို့ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖော်ပြထားထားတဲ့ DNS Management Page ဆိုတာ များသောအားဖြင့် Domain Management ဒါမှမဟုတ် Advanced Settings အောက်မှာရှိတတ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ Domain name အတွက် CNAME အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးဖို့ ပုံက အမှတ်စဉ် ( ၂ ) မှာ ပေးထားတဲ့ code တစ်ခုနဲ့ CNAME record မှာ ဖြည့်ရမယ့် အမှတ်စဉ် ( ၃ ) က ဟာ တစ်ခု စုစုပေါင်း ( ၂ ) ခုကို မှတ်ထားလိုက်ပါမယ်။ နောက်ပြီး DNS Management Page ထဲမှာ ရှိတဲ့ CNAME record နေရာမှာ ခုလို သွားရောက်ဖြည့်သွင်းပေးပါမယ်။ ( ဒီအောက်က ပုံက ပုံစံတူနိုင်လောက်မယ့် ဖြည့်စွက်နည်းကို မြင်သာအောင် ဥပမာပေး ဖြည့်သွင်းထားတာပါ။ )
တကယ်လို့ Google Apps ထဲက Google Mail Service ကိုပါ ကိုယ်က အသုံးပြုမှာ ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် MX record မှာ ခုအောက်ဖော်ပြပါ ပုံလို ဖြည့်သွင်းပေးရပါဦးမယ်။ MX record ဆိုတာလည်း များသောအားဖြင့် CNAME record နဲ့ အထက်အောက်ကပ်လျက် တွဲပြီး ရှိနေတတ်ပါတယ်။
အားလုံးလုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ တတိယမြောက် ပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့ နေရာကိုသွားပြီး I've completed the steps above. ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲလို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ နောက်စာမျက်နှာ တစ်ခုဆီ ခေါ်သွားပြီး အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံလိုမျိုး ပုံစံတူ စာမျက်နှာ တစ်ခုကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Email - ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Activate လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
Email - ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Activate လုပ်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် အထက်ဖော်ပြပါပုံလို Active အနေနဲ့ ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပြီး အဲလို မြင်တွေ့ရဖို့ ( ၁ ) နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်လောက် စောင့်ရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဟာ host မှာ အရင်သုံးနေတဲ့ mail accounts တွေ ရှိနေပြီး အဲ့ဒီ့ accounts တွေကို မသုံးချင်တော့ပဲ Google Apps က mail ကိုပဲ သုံးတော့မယ်ဆိုရင်လည်း သူနဲ့ တစ်ပုံစံတည်း အမည်တူ နောက် accounts တွေ Google Apps မှာ ထပ်လုပ်လို့ ရပါသေးတယ်။ နားလည်လွယ်အောင် ထပ်ရှင်းရရင် အရင် Google Apps မှာ account မလုပ်ခင်က Mails အတွက် သုံးတဲ့ အကောင့်က jjajsjidjf@11dreams.net ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ သူ့လိုပဲ ပုံစံတူ နောက် account တစ်ခု Create New Users ကနေ လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။ အဲလို လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် - အထက်ဖော်ပြပါပုံက Create new users ဆိုတာကို click ပေးလိုက်ပါ။
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ဟာ self hosted website တစ်ခု ဖြစ်တယ် ဆိုကြပါစို့ ကျွန်တော်တို့တွေ CNAME verification ကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ webhost မှာ CNAME ကို create လုပ်ဖို့ support ticket တစ်ခု တောင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ ( ဒါကြောင့် file upload method ကပိုပြီး လွယ်ကူမယ်လို့ ပြောခဲ့တာပါ။ ) သူတို့တွေကနေ CNAME တစ်ခု ကိုယ့်အတွက် Create လုပ်ပေးပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ ( ဒါမှမဟုတ် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း file ကို upload တင်ပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ ) ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ domain ownership ကို verify လုပ်လို့ ရပါပြီ။ ဆက်ပြီး MX Records ကို create လုပ်မယ် ဆိုရင်လည်း Hosting မှာ ရှိနေတဲ့ Cpanel ကနေ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ CPanel ကို ဝင်ပါ။ နောက်ပြီး MX Entry ဆိုတာကို click ပေးပါ။ ( ပုံစံတူ ဖော်ပြချက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ Hosting တိုင်း ခုလိုမျိုး တူညီတဲ့ ပုံစံ မရှိနိုင်ပါဘူး။ )
အဲ့အထဲမှာမှ ကိုယ့် ပြောင်းလဲ ချင်တဲ့ Domain ကို Dropdown ရွေးချယ်ပြီး သူ့ထဲမှာ တည်ရှိနေတဲ့ MX records တွေကို အားလုံးကို delete လုပ်ရပါမယ်။ အဲ့နောက်မှာမှ အောက်ဖော်ပြပါ MX records ( ၅ ) ခုကို ပြန်ပေါင်းထည့်ပေးပါ။
အားလုံးပြီးဆုံးသွားရင် နောက်ဆုံး အခြေအနေမှာ မြင်ရမယ့် Final CPanel MX records က ခုလို ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
အားလုံး လုပ်ဆောင်ပြီးသွားရင်တော့ Google Apps ဆီ ပြန်လာပြီး အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ I have completed these steps ဆိုတာကို click ပေးလိုက်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ဆောင်နည်းတွေက Blogger သမားတိုင်း လုပ်ဆောင်ဖူးတာ မဟုတ်လို့ ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်လုပ်ဆောင်တဲ့ အချိန်မှာ အနဲနဲ့ အများ အခက်အခဲရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲကို နားလည်တဲ့ Domain Hosting Services တွေကနေပြီး users တွေ အသုံးပြုရလွယ်ကူအောင် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ပြင်ဆင်ပေးထားတာမျိုးတွေ Domain Hosting Services အလိုက် အသင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း ပြောရမယ် ဆိုရင် Domain name တစ်ခု ကိုယ်က ဝယ်ထားပြီး အဲ့ Domain name ကို blogger မှာ သုံးဖို့ အတွက်ဆိုရင် Turn on/off Blogger Settings ကနေ click တစ်ချက်ပေးယုံနဲ့ အသင့်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ အဲလိုပဲ Google Apps အတွက်လည်း Turn on/off Gmail for the domain ကနေပြီး click ပေးလိုက်ယုံနဲ့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သမျှ MX records ထည့်ပေးတဲ့ အဆင့်တွေ တစ်ခုမှ ကိုယ်တိုင်လုပ်စရာ မလိုတော့ပဲ အလိုလျောက် သူ့ဘာသာ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် Godaddy ကနေပေးထားတဲ့ automatic configuration tool ဆိုတာကို သွားကြည့်ကြည့်ပါ။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေ Email configuration ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပြီးပြီ ဖြစ်လို့ http://mail.google.com/a/yourdomain.com ကနေ ကျွန်တော်တို့ site နဲ့ ပတ်သတ်တ့ဲ Mails တွေကို လွှဲပြောင်းလက်ခံရယူလို့ ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Google Apps နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အားလုံးပဲ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ။
How To Setup Google Apps on Your Website [ Bloggerplugins ]
2:54 PM LeaveaComment Read More
Official Google Buzz Buttons for Your Blog
လွန်ခဲ့တဲ့ ( ၃ ) ရက်လောက်က Google ကနေပြီး Google Buzz အတွက် Share နဲ့ Follow လုပ်နိုင်ဖို့ buttons တွေ officially released အနေနဲ့ လွှင့်တင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Buttons တွေက ဘာကောင်းလဲ ဆိုရင် ဥပမာ Blog ဖြစ်ဖြစ် Website ဖြစ်ဖြစ် ရေးတယ် ဆိုပါစို့ ကိုယ့် articles တွေကို စာဖတ်သူတွေက Google-Buzz ကနေ တစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် Share ပေးလို့ ရပါတယ်။ ဒီ Buttons ကို ကျွန်တော် စမ်းပြီးပါပြီ။ သဘောလည်း ကျပါတယ်။ အရင်က ကျွန်တော့် site မှာ posts တွေကို share လုပ်ဖို့ အတွက် Google Reader ကိုပဲ သုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းက Sharing လုပ်တဲ့ နေရာမှာ Google Buzz ကို လူသုံးပိုများလာကြလို့ အရင်သုံးနေကျ Google Reader ကို Share ပေးတဲ့ button ကနေပြီး Google Buzz ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်။
Google Buzz က ထုတ်တဲ့ Share buttons တွေက သူ့ကို click ပေးလိုက်ရင် နောက် pop-up windows တစ်ခု တက်လာပြီး အဲ့ထဲမှာ ကိုယ်ထပ်ပြီး ရေးသားပြင်ဆင်ချင်တာ ရှိရင်ရေးသား နောက်ပြီး ကိုယ် share ပေးချင်တာကို မျှဝေတာပါ။ Google ကပေးလိုက်တဲ့ Google Buzz button မှာတော့ နောက်ထပ် ကောင်းတာလေး တစ်ချက်ပါလာပါတယ်။ အဲတာကတော့ counter ပါ။ ကိုယ့် articles ကို စာဖတ်သူက ဘယ်နကြိမ်ဝေမျှ ပြီးသွားပြီလဲ ဆိုတာ counter ကနေ တဆင့် သိနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နည်း အဆင့်ဆင့် ကတော့ -
ပထမအဆင့် အနေနဲ့ - ဒီစာမျက်နှာ ကိုသွားပါ။ "Post To Buzz" ဆိုတာနှိပ်ပြီး နောက်စာမျက်နှာမှာ ကိုယ့် ဘလော့မှာ သုံးဖို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ button ကိုရွေးပါ။ ပေးထားတာကတော့ သုံးလေးမျိုး မက ရှိပါတယ်။
"URL to post" မှာ "Containing Page" ကိုထား နောက်ပြီး "Image to post" မှာ None ကိုထားပြီး အောက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ code-box ထဲက code ကို copy ကူးဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။
ဒုတိယအဆင့် အနေနဲ့ - Blogger ရှိရာဆီကို log in ဝင်ပြီး Layout > Edit HTML ကို သွားပါ။ နောက်ပြီး "Expand Widget Tempaltes" ကို tick ပေးထားလိုက်ပါ။ နောက်ပြီးရင် အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ code ကို template ထဲမှာ ရှာဖို့ CTRL+F ကိုနှိပ်ပြီး ဒီအောက်က code ကို ပေါ်လာတဲ့ box ထဲမှာ copy ကူးထည့်ပြီး ရှာလိုက်ပါ။ ဒီအောက်က ပုံကို ကြည့်ကြည့်ရင် ရှင်းပါလိမ့်မယ်။
တတိယအဆင့် အနေနဲ့ - အဲ့ဒီ့ အစိမ်းရောင်နဲ့ high light ပြထားတဲ့ စာကြောင်းရဲ့ အောက်မှာ ကပ်ပြီး အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ code ကို paste လုပ်လိုက်ပါ။
အဲလို ထည့်ပြီးတာနဲ့ အနီရောင်နဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ စာကြောင်းနေရာမှာ အနည်းငယ် ပြင်ဆင်မှု လုပ်ရပါမယ်။ ကျွန်တော် အနီရောင်နဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ထိပ်ဆုံး ပထမဆင့်မှာ code-box ထဲကနေ ရလာတဲ့ code ကို အစားသွင်းပေးရပါမယ်။
ဘာကြောင့်ခုလိုလုပ်ရသလဲ > ဘာလို့လဲ ဆိုရင် default အနေနဲ့ ပါလာတဲ့ button ရဲ့ alignment က "Right" မှာ ဖြစ်နေပြီး ကျွန်တော်တို့တွေ သူ့ကို "Left" ကို ချိန်းလို့ ရသလို button ရဲ့ position ကိုလည်း ပြောင်းလဲ ပစ်ချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို လုပ်ဆောင်ဖို့ text-align:right;margin-top:-42px;'> ဆိုပြီး ထည့်ထားလိုက်တာပါ။
တကယ်လို့ ဒုတိယအဆင့်မှာ ရှာခိုင်းလိုက်တဲ့ code ကို template မှာ ရှာလို့ မတွေ့ဘူးဆိုရင်ရော - အဲလို အခက်အခဲရှိလာရင်တော့ အဲ့စာကြောင်းအစား အောက်ဖော်ပြပါ စာကြောင်းကို အစားထိုးရှာဖြွေကည့်ပါ။
တွေ့ပြီ ဆိုရင်တော့ တတိယအဆင့်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ထည့်သွင်းရမယ့် နည်းတွေ အတိုင်း စာကြောင်းတွေ ၊ အစားသွင်းရမယ့် ဟာတွေ အကုန်လုံးကို အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ စာကြောင်းတွေရဲ့ အပေါ်မှာ ထည့်သွင်းပေးရပါလိမ့်မယ်။
အားလုံး လုပ်ဆောင်ပြီးသွားရင်တော့ Save လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
3:07 AM LeaveaComment Read More